lundi, 08 juin 2020 20:22
67ha: Jiolahy roa mitam-basy sy antsy lavalela voasambotry ny Polisy
Fanomezam-baovao avy amin’olontsotra nahatsikaritra ny fihetsik’ireto lehilahy roa nihaodihaody tamin’ny scooter teny manodidina no nidinan’ny Polisy misahana ny heloka bevava, sakelika fahaefatra Anosy, avy hatrany teny an-toerana.
Nisy ny fifanenjehana, ka tamin’izany no nampidaraboka lavo tamin’ny tany ny moto nentin’ny iray tamin’ireo olon-dratsy, ary ny Polisy nanao fanamiana sivily no tonga aloha raha nikasa hamoaka basy ilehio. Efa voahodidiana tsy afa-nitsoaka ny faharoa.
Nahitana basy voafahana bala telo tany amin’ilay jiolahy iray raha antsy lavalela sy scotch ny tamin’ny faharoa. Voalaza fa efa mpanao fanafihana mitam-piadiana eto an-drenivohitra izy roalahy ireo.
lundi, 08 juin 2020 19:58
Fambolena: Nisy fikorontanana ny famatsiana ny tsena sy fahasarotan’ny famoahana vokatra
Nihaona tamin’ireo Loholon’i Madagasikara tetsy amin’ny Lapan’Anosikely androany alatsinainy 08 jona 2020 maraina ny Minisitry ny fambolena, ny fiompiana sy ny jono Ranarivelo Lucien Fanomezantsoa, ka tamin’izany no nambarany fa nisedra olana be mihitsy ny mpamboly eny ambanivohitra mandritra ity fihiboana tamin’ny ampahany iny, noho ny valanaretina Covid-19.
Misy ny fikorontanana eo amin’ny famatsiana ny tsena sy ny fahasarotan’ny famoahana vokatra, hoy izy ka hita soritra ny fihenan’ny vola miditra tamin’izy ireo.
lundi, 08 juin 2020 19:35
Antsiranana: Mitaky ny handoavana ny « vacation baccalauréat 2019 » ireo nisahana izany
Nivory tao amin’ny lycée Zafy Albert Antsiranana androany alatsinainy 8 jona 2020 ireo mpampiatra , mpitsara fanadinana sy ny mpiambina fanadinana, niasa tamin’ny bakalôrea in-droa miantoana ny taona 2019.
« Mitaky ny hanafainganana ny fandoavana ny « vacation » izahay mba tsy ho tonga amin’ny fanakatonana ny sekoly », hoy ny fanambarana nataon’izy ireo teo anatrehan’ny Cisco Antsiranana 1 sy DRENETP DIANA. Hitohy rahampitso maraina ny fihaonana.
lundi, 08 juin 2020 19:34
Mpiasa avy any Koweit: Tonga teny Ivato io hariva io
Teratany Malagasy niasa tany Koweit miisa 176 miampy zaza iray no tonga an-tanindrazana androany. Tamin’ny enina ora hariva mahery no nigadona teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, ny fiaramanidina manokana nitondra azy ireo.
Efa nandalo fitiliana izy ireo ary manana fanamarinana fa salama no niala tany Koweit. Nisy na izany aza ny fakana hafanana azy ireo teo ampahatongavana teny Ivato, ary fiara be miisa valo no efa voaomana hiondra azy ireo amin’ny toerana voatokana hanokanam-ponenana azy ireo mandritra ny 14 andro, hanaovana fanaraha-maso ara-pahasalamana azy ireo.
Misy amin’ireo no tapitra fifanarahana arak’asa tany Koweit, misy ny tapitra « contrat » ary ny sasany nanana olana tamin’ny mpampiasa azy.
Nanamora ny fampodiana azy ireo an-tanindrazana ny fanjakana koweisiana nifarimbona tamin’ny OIM (Organisation internationales pour les migrations).
lundi, 08 juin 2020 16:40
Mety mahasoa anao: Ahoana ny installation électrique
Somary lava ny fanazavana, fa vakio miandalana, dia hivereno raha tsy zaka indray mamaky.
Raha vao miresaka installation électrique na fitsinjarana herinaratra ao an-trano dia miresaka courant na herinaratra izay.
Manomboka eto, TANDREMO FA MAHAFATY, raha tsy hay dia aleo maka matihanina, fa fanazavana mba hitaran'ny saina na ahafahana manara-maso ny mpiasa ihany no omena eto, ka tsy tompon'antoka amin'izay mety loza na fahasimbana mitranga.
Arak'izany dia mila fitandremana tanteraka, ampidino hatrany ny disjoncteur raha misy zavatra kitihina na amboarina. Manaova kiraro, manaova gant tsy andairan'ny courant raha tsy azo tapahana ny courant. Aza mikasika fil raha mando ny tanana na ny tongotra. Mila fitaovana toa ny testeur, na tournevis mahita ny fisian'ny herinaratra, mampiasà fitaovana tsy andalovan'ny herinaratra (isolant non conducteur).